Vaovao - Ny vokatra amidy indrindra amin'ny taona 2020 - milina famenoana
Ny milina famonosana Lianteng dia nanolo-tena tamin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovan'ny milina famonosana, matihanina ao an-trano mirotsaka amin'ny sakafo, fanafody ary fananganana fonosana mandeha ho azy feno automatique. serivisy aorian'ny varotra sy serivisy fiatoana hafa.Lianteng dia nanjary orinasa teknolojia avo lenta manambatra endrika, famokarana, varotra ary fikarohana sy fampandrosoana.
Lianteng dia namolavola andiana milina famenoana, izay ho vokatra be mpividy indrindra amin'ny taona 2020. Ity andiana milina famenoana paty ranoka ity dia mety amin'ny simika isan'andro, sakafo, solika, fanafody, famonoana bibikely ary indostria hafa, afaka mameno karazan-tsiranoka samihafa manaparitaka vokatra. Izy io dia mandray famenoana tsindrona piston sy fitaovana valizy telo-lalana, izay manana tombony amin'ny famenoana avo lenta, fametrahana sy debugging mety, fanadiovana sy fikojakojana tsotra ary tsy misy mitete. Ny faritra mifandray amin'ny fitaovana dia natao amin'ny vy vy 304 (vy namboarina 316L azo namboarina). Ny endriny vy tsy misy fangarony dia manana ny mampiavaka azy amin'ny endrika madio sy madio ary mahafinaritra. Ireo singa nafarana toa ny Sick Light Eye avy any Alemana, FESTO avy any Alemana ary AirTac avy any Taiwan dia azo fidina, ka ny milina fanondrahana dia manana fahombiazana tsara amin'ny fampisehoana marin-toerana sy ny fiasa miovaova.
Ho fanampin'izany, mamokatra milina fanoratana ihany koa i Lianteng, milina fanamarihana marika, fitaovana milina fanaovana kaody mandeha ho azy, fitaovana milina famehezana mandeha ho azy, kojakoja milina fanadiovana, sns. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra dia aondrana any Eropa, Etazonia sy Azia atsimo atsinanana ary taratra manerana ny firenena. avy amin'ny mpanjifa vaovao sy taloha ary ny fanohanan'ny fiaraha-monina.